Option ကိုဗြိတိန် | ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့
Greta Thunberg: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရန်သူရူပဗေဒဖြစ်၏။ "
upstream: ဗြိတိန်မြစ်များအတွက် Microplastics
Jacqui - '' ကိုယ့်ငါဖြစ်၏ဘယ်လိုကံကောင်းထင် ''
Sainsbury ရဲ့ပလပ်စတစ်မူဝါဒက - သူတို့လျော့နည်းဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး
Burn စကားလုံးတွေကို: ဒင်း Atta
သင်၏အစွန့်ပစ်လျှော့ချဘို့ 12 စျေးပေါတဲ့ & လွယ်ကူသိကောင်းစရာများ - ရေရှည်တည်တံ့သောသုညစွန့်ပစ် Hack
in အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, Initiatives နှင့်အသနားခံ, UK
| ဒုက္ခသည်မိသားစုများအတူတကွစောင့်ရှောက်ကူညီပါ Oxfam GB အထိ
မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံရှိအကူအညီများပေးပို့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Wendy ၏နောက်ဆုံးသတင်း
သင်လှူဒါန်းခဲ့သည့်အဝတ်အစားကို Oxfam မည်သို့ပြန်လည်အသုံးပြုသည်၊ Oxfam GB
in အခြားနည်းလမ်းများနှင့် Opinions
ivy ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလွယ်ကူစွာ DIY ဆေးကြောဆေးဖြစ်သည်
Our grandmothers might still know it: Washing detergent can be easily produced by using common ivy leaves. Nature provides it for free in our back […] နောက်ထပ်
ချ - အထည်အလိပ်စွန့်ပစ်မည့်အစားပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း
Down နှင့်အမွေးအတောင်များသည်သဘာဝထုတ်ကုန်များဖြစ်သော်လည်းတိရိစ္ဆာန်များကိုနာကျင်စေခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ Re: Down ဟာရေရှည်တည်တံ့နိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်က […] နောက်ထပ်
ဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် (EIB) သည်ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်မှန်းချက်တိုးပွားလာမှုကိုပြသသည့်စွမ်းအင်ချေးငွေမူဝါဒအသစ်ကိုသဘောတူခဲ့သည်။ နောက်ထပ်
အောက်မေ့ပွဲနေ့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်၊ ဘိန်းတွေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရသလဲ။ သတင်းကောင်းမှာဘိန်းသည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ဘိန်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ […] နောက်ထပ်
စက်ဘီးစီးခြင်းလုပ်ငန်းသည်အလှအပစောင့်ရှောက်မှုရရှိသည်။ စားသောက်ကုန်များကိုစွန့်ပစ်မည့်အစားအလှအပလုပ်ငန်းသည်ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ […] နောက်ထပ်
Bran Symondson သည်အနုပညာမှတစ်ဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းမရှိသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အထူးတပ်ဖွဲ့ဟောင်းနှင့်သတင်းထောက်ဓာတ်ပုံဆရာကိုလန်ဒန်တွင် […] တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ နောက်ထပ်
Colgate နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် TerraCycle သည်စက်တင်ဘာလတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရသောခံတွင်းစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များမှပြုလုပ်သည့်ယူကေ၌ပထမဆုံးကစားကွင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ Cranford ရှိကစားကွင်း […] နောက်ထပ်
Greta Thunberg သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆုချီးမြှင့်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်
Greta Thunberg သည် […] ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်ဘဝအသစ်ကိုရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့် 2019 Nordic Council ၏သဘာဝဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ နောက်ထပ်
in အခြားနည်းလမ်းများနှင့် Opinions, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ 100 လူ ဦး ရေသန်းသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ရန်အသေးစားသတ္တုတူးဖော်ရေးကိုမှီခိုကြရသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိရွှေတူးဖော်သူများ၏ 90% ဖြစ်သည်ဟု Fairtrade ဖောင်ဒေးရှင်းကဆိုသည်။ The […] နောက်ထပ်
နောက်ဆုံးမိနစ် DIY ဟယ်လိုဝတ်စုံအတွက်5အကြံပေးချက်များ
Boris ဂျွန်ဆင် / Donald Trump ဒီနှစ်အားလုံး Brexit အကြောင်းပါ။ Beano မှသုတေသနပြုချက်အရဗြိတိသျှမိဘများ၏ထက်ဝက်ကျော်နှင့်သူတို့၏ကလေးများ […] နောက်ထပ်
John Lewis သည်အဝတ်အစားနှင့်အလှအပပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ၀ ယ်ယူသူများအားဆုချသည်
အချည်းနှီးသောအလှအပထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အကြိုက်ဆုံး ၀ တ်ဆင်ခြင်းများကိုယူဆောင်လာကြသော ၀ ယ်သူများသည် John Lewis မှလက်ဆောင်ဘောက်ချာများဖြင့်ဆုချသည်။ ဂျွန်လူးဝစ်၏အလှကုန်ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း […] နောက်ထပ်
“ လုပ်သောအရွက်” ကိုတီထွင်။ ရေရှည်တည်တံ့သောဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လုပ်သည်
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများသည် […] ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်နေရောင်ခြည်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နှင့်ရေကိုသာလိုအပ်သည့် 'အတုအရွက်' ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ထပ်
492,020 တန်ချိန်ငါးထုတ်လုပ်မှုမှငါးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုယူကေတွင်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်သည်။ Sussex တက္ကသိုလ်မှ Lucy Hughes သည်အလားအလာကောင်းများတွေ့မြင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်
မလိုအပ်သောစွန့်ပစ်မှုများမရှိဘဲဟယ်လိုဝိန်းအတွက်5အကြံပေးချက်များ
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဟယ်လိုဝင်းကြောင့်မယုံနိုင်လောက်သောအမှိုက်များကိုဖန်တီးကြသည်။ 18,000 ဖရုံသီးတန်ချိန်နှင့်ဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံခုနစ်သန်းကိုနှစ်စဉ်ထုတ်ပစ်သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုရန် […] နောက်ထပ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများ၏ 23% သည်သုံးလအတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ 2019 အထိစက်ရုံအခြေပြုနို့အစားထိုးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကြသည်။ The […] နောက်ထပ်
စိန့် Austell ၌ Cornwall ၏ bi ည့်သည်နှစ် ဦး ပါသော biomes နှစ်ခုဖြင့်ဆွဲဆောင်သောProjectဒင်စီမံကိန်းသည်သူတို့၏ရှေ့ပြေးဘူမိအပူစွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးရေတွင်းကိုတူးဖော်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်
အခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ယူကေတွင် 1% သာရှိသေးသည်
privacy ပြissuesနာများရှိသော်လည်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူအများစုသည် Google ကိုကပ်ကြသည်။ Statcounter Global Stats အရစက်တင်ဘာလ 2019 တွင်ယူကေ၏စျေးကွက်ဝေစုက 92% သည် […] နောက်ထပ်
UK Halloween ပွဲတော်များသည်ယခုနှစ်တွင် 2,000 တန်ချိန်အ ၀ တ်အထည်များနှင့်ဝတ်စုံများမှပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်ဟု Fairyland Trust နှင့် Hubbub စစ်တမ်းကဖော်ပြသည်။ […] နောက်ထပ်
Waitrose သည် multibuy ဘူးများ၏ပလပ်စတစ်များကိုဖယ်ရှားသည်
Waitrose သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်၏စည်သွတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့၏ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးအဆင်ပြေစေရန်သံဗူးသုံးခွက်သို့မဟုတ်လေးလုံးကိုသိမ်းထားသည်။ […] နောက်ထပ်
အပြင်ဘက်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Finisterre သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအထည်အိတ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Aquapak ကာတွန်းကိုမိတ်ဆက်ခြင်း (အသစ်ပြန်လည်) - အသံမရှိသော Aquapak Polymers သည်၎င်း၏ပူနွေး။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောကမ္ဘာ့ပလပ်စတစ်အကျပ်အတည်းအတွက်စစ်မှန်သောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ […] နောက်ထပ်
Coca-Cola သည်ပထမဆုံးပုလင်း 25% ပြန်လည်အသုံးပြုပင်လယ်ရေအမှိုက်သရိုက်များနှင့်အတူတင်ဆက်သည်
ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးမိတ်ဆက်ခြင်း - Coca-Cola Co. , 2019-10-03 တွင်တင်ထားသောပင်လယ်မှပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိုကာကိုလာပုလင်း။ ပြန်လည်အသုံးပြုသောနည်းပညာအသစ်များသည်အရည်အသွေးနိမ့်ကျ […] နောက်ထပ်
မြောက်ပင်လယ်ကော့ဒ်ငါးများကိုကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်ဟုယခင်ကယူဆခဲ့ကြသည်။ အစုရှယ်ယာများသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောဇီဝဗေဒအဆင့်အောက်သို့ကျပြီးနောက် Marine Stewardship Council (MSC) […] နောက်ထပ်
in အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပို့လိုက်ကြတယ်
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူရာပေါင်းများစွာ [ ... ] ရန် Extinction ပုန်ကန်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုဆန္ဒပြပွဲများတစ်စက္ကန့်တစ်နေ့တာအတွင်းအင်္ဂါနေ့တွင်ဗဟိုလန်ဒန်မြို့တွင်ထွက်စားခန်းချကြ၏ နောက်ထပ်
"ဖွင့်ယခုအရေးယူကြပါစို့!" - ငယ်ရွယ်ရာသီဥတုလုပ်ငန်းများကိုကနေစုဝေးရာအျောဟစျသံ
Greta Thunberg နှင့်အခြားကလေးများကုလမှတိုင်ကြားချက်တင်သွင်း
16 မှ 15 အကြား 8 နှစ်အရွယ် Greta Thunberg နှင့် 17 သည်အခြားကလေးကအသနားခံလွှာအသက်ကမ္ဘာတဝှမ်း 12 နိုင်ငံတွေထဲကနေ [ ... ] တစ်ဦးစုပေါင်းအရေးယူယူကြပြီ နောက်ထပ်
"အခုအရေးယူကြရအောင်။ " - လူငယ်ရာသီဥတုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်သော Jessy and Isaac | Oxfam GB အထိ
“ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကတကယ့်ကိုအမှန်ပဲ။ ပြီးတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ယခုအရေးယူဆောင်ရွက်ကြပါစို့။ ” […] ၏ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများကို Jessy & Isaac ဖော်ပြသည်ကိုကြည့်ပါ။ နောက်ထပ်
Alice Wilby၊ Bel Jacobs နှင့်အတူဒုတိယအဟန်လက်စွဲ
Freelance ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစာရေးဆရာ @beljacobs_com နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ဖက်ရှင်အတိုင်ပင်ခံ @alicewilby သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ @oxfamonlineshop အရသာအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏မီလ်တန်ပွိုင့်သိုလှောင်ရုံသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာရှိစဉ်, […] နောက်ထပ်
စကော့တလန် Gin distillery သက်တမ်းတိုးခြင်းမှဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြောင်းလဲလိုလား
အဆိုပါ HySpirits စီမံကိန်းကို [ ... ] သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့စီးပွားရေးဌာန, စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုမဟာဗျူဟာ (BEIS) မှရန်ပုံငွေ£ 148,600 ချီးမြှင့်ထားပြီး နောက်ထပ်
2019st စက်တင်ဘာလအပေါ်ကမ္ဘာ့ဖလားရှင်းလင်းရေးနေ့ 21
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကမ္ဘာ့ရှင်းလင်းရေးနေ့ 17 နိုင်ငံများတွင်ကျော်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 150 ကျော်ကလူကိုဆွဲဆောင်။ ကမ္ဘာအနှံ့ Cleanup ၏ 36 နာရီအစိမ်းရောင်လှိုင်း [ ... ] နောက်ထပ်
Idai ဆိုင်ကလုန်းပြီးနောက်လူများ၏အသက်တာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည် Oxfam GB
အာဖရိကတောင်ပိုင်းသို့အဆိုးရွားဆုံးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းများအနက် Idai ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးခြောက်လအကြာ၌ဖြစ်သည်။ ဤရုပ်ရှင်ကိုမာလာဝီတွင်သုံးကြိမ်ရိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်
သေးငယ်တဲ့ရွာ၌တစ်ဦးကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာဆိုင်သုညစွန့်ပစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့စားစရာဘို့လမ်းကိုဦးဆောင်: Warrington အတွက်အိမ်မွေးစားစရာခန်း, Cheshire မကြာသေးမီက [ ... ] တစ်သုညမိတ်ဆက် နောက်ထပ်
in Initiatives နှင့်အသနားခံ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု
Vivienne Westwood Oxfam ရဲ့ #SecondHandSeptember ထောက်ခံပါသည်
ပို. ပို. နာမည်ကြီးတွေ [ ... ] #SecondHandSeptember, 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့အဝတ်အစားအသစ်တွေဝယ်ဖို့ရန်မပြောပါနှင့်ဒုတိယ-လက်ဖက်ရှင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအပေါင် Oxfam ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းနေကြတယ် နောက်ထပ်
မုဆိုးနှင့် Stella McCartney သက်သတ်လွတ် wellies ဖွင့်
ဗြိတိန်အမှတ်တံဆိပ် Hunter ဖိနပ်နှင့် Stella McCartney စက်တင်ဘာ, 16 အပေါ်သစ်တစ်ခုရေရှည်တည်တံ့ရော်ဘာ Boot တက်ဖွင့်ဖို့အထိပူးပေါင်းပါပွီ။ အဆိုပါ Boot တက်သက်သတ်လွတ်သည်နှင့် [ ... ] နောက်ထပ်
Refill App ကို 250,000 downloads, အခမ်းအနားကျင်းပ
3 မှတ်ချက်များ7 မဲ
အဆိုပါ Refill app ကိုသူတို့ကဖေး, စားသောက်ဆိုင်များ, ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားအများပိုင်သောနေရာများမှာအခမဲ့ tab ကိုရေနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရေပုလင်း refill နိုင်သောနေရာကလူကိုပြသထားတယ်။ [ ... ] နောက်ထပ်
14 ရှယ်ယာ11 မဲ
ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်းသည်မကြာမီအမှိုက်ကနေဖန်ဆင်းတော်ရေရှည်တည်တံ့ဂျက်လောင်စာဆီနှင့်အတူပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ Immingham လီမိတက်သည်အဘယ်အရာဖွံ့ဖြိုးရန်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းလျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ပါသည် Altalto [ ... ] နောက်ထပ်
ရေ ATM စက်များသည်ကင်ညာသို့သန့်ရှင်းသောရေကိုသယ်ဆောင်လာသည် Oxfam GB
“ ဒါကလုပ်နည်းလုပ်နည်းအသစ်ပဲ” ဟုပြောသည်။ သင်၏ဘဏ်ကဒ်ရှိအဆက်အသွယ်မရှိသောနည်းပညာသည်အသက်ကယ်သုံးစွဲမှုဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ အတွင်း […] နောက်ထပ်
သင့်ရဲ့အမတ်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးနိုင်မလဲ Oxfam GB
Oxfam မှစေတနာ့ဝန်ထမ်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသူ Emma ကသူမ၏အမတ်အားစည်းရုံးခြင်းဖြင့်သူပြောင်းလဲမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုရှင်းပြသည်။ https://www.oxfam.org.uk/ccp တွင်မဲဆန္ဒနယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူအဖြစ်လျှောက်ထားပါ။ နောက်ထပ်
Burn စကားလုံးတွေကို: Valerie Bloom
တွေ့ဆုံရန် Taku, ငါတို့အံ့သြဖွယ်ရေအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး | Oxfam GB
လူများကိုသန့်ရှင်းသောရေရရှိစေရန်နှင့်ရောဂါမှဘေးကင်းစေရန်ကူညီပေးနေသောဇင်ဘာဘွေရှိကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရေအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန် Taku နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ အရင်းအမြစ် နောက်ထပ်
အသာပုတ်ပါရေမရှိသည့်အခါသင်မည်မျှအချိန်ဆုံးရှုံးသနည်း။ | Oxfam GB
Tawana သည် 12 နှစ်ဖြစ်သည်။ သူမမိသားစုကိုရေထောက်ပံ့ရန်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ရေကိုယူသည်။ ဒီအချိန်ကကြာတယ် ဇင်ဘာဘွေတွင် Oxfam သည် […] နောက်ထပ်
ဘယ်လို Glastonbury မှာဖြစ်ပျက် | Oxfam GB
အပတ်တိုင်း 11 အ ၀ တ်အထည်သန်းပေါင်းများစွာသည်အမှိုက်ပုံသို့ရောက်သွားသည်။ လျှင်မြန်စွာဖက်ရှင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပေါ်တိုးမြှင့်ဖိအားပေးနေသည်။ ယခုနှစ် Glastonbury ပွဲတော် […] နောက်ထပ်
Françoise (1985-2019)၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အကူအညီပေးရေးလုပ်သားနှင့်တွေ့ဆုံ | Oxfam GB
ဤလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိအံ့သြဖွယ်ရာအကူအညီပေးရေးလုပ်သားများအားကယ်တင်ရန်အတွက်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်နေသည့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ နောက်ထပ်
Oxfam- ဘားကုတ်နောက်ကွယ် - လှုပ်ရှားမှုတစ်နှစ်!
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာနောက်ကွယ်ရှိလူ့ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုအဆုံးသတ်ရန် Oxfam သည် Behind the Barcodes လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စူပါမားကက်တွေက […] နောက်ထပ်
Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံး Crowdfunding လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ နီပေါနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပျားမွေးမြူရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ https://www.crowdfunder.co.uk/oxfambeesfornepal ၎င်းသည်ဒေသခံလယ်သမားများကိုထောက်ပံ့သည်။ နောက်ထပ်
သငျသညျသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေကြသည် | OXFAM GB
Oxfam ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်သည်၊ ဈေးဝယ်၊ ပေး၊ ချီတက်၊ ချီတက်မည်၊ skydive သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်နည်းကိုမဆိုထောက်ပံ့သည်ဖြစ်စေသင်ရိုက်နှက်နေသောသန်းနှင့်ချီသောလူများနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေသည်။ နောက်ထပ်